जीवन सुखी बनाउने दौडमा उनीहरू आमाको माया र देशको सपना कता लुकाउँदै :एनआरएन | नेपाल इटाली डट कम
मुस्ताङको मार्फामा जन्मेर अनेक परिवेश भोग्दै जापान पुगेका देवमान हिराचनलाई उता पुगेपछि रेडियोलोजी पढ्नु थियो । जापन युनिभर्सिटीमा रेडियोलोजी भर्ना गरेपछिको उनको जीवन साह्रै संघर्षमा बित्यो । ‘संघर्ष धेरै गर्नुपर्‍यो जापानमा बाँच्न,’ ३५ वर्षअघिका रातमा उनी हराउँदै थिए, ‘मैले भोगेका समस्या त गनिनसक्नुका छन्, कुनैवेला यी समस्याबाट पार नपाइने भइयो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो ।’ त्यसवेला ‘पढ्न र बाँच्न जापानमा निकै दुःख’ व्यहोरेको लामो कथा यिनको जीवनको डायरीमा छ । अनुहारमा अनेक घात-प्रतिघात छ । दुःखका रेखा पोतिएका छन् । ‘त्यही दुःखबाट त सुखमा आइयो’, उनले सुनाए, ‘दुःख सबैको जीवनसँगै आएको हुँदोरहेछ ।’ तर, दुःख यिनलाई पि्रय लाग्यो । दुःखको लामो बाटो छिचोलेरै उनले जापान युनिभर्सिटीबाट रेडियोलोजीको पढाइ सके ।
समयका आयाम छ, रंग-बिरंगका । कालको चक्रसँग पैँचो मागेर समय मान्छेको जीवनका थोत्रा थाङ्ना सिउँदोरहेछ । कहिले फुल्छ चट्टानमा समय, कहिले भने वसन्तमा पनि फुल्दैन । सायद चट्टानमा पनि फुल्यो समय । पढाइ सकेपछि यिनका सुखका दिन सुरु भए । अहिले हिराचन नेपालमा खोलिएका विभिन्न ट्राभल एजेन्सीमार्फत नेपाल र जापानबीचको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति भएका छन् । नेपाल फ्युचर थिङ्किङ एसोसिएसन र एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर नेपालसँग पनि सम्बन्धित छन्, हिराचन । बितेको १० वर्षदेखि जापानको नोजुकी अस्पतालमा कार्यरत हिराचन जापानमा हीराको व्यापार, पर्यटन, सूचना, प्रविधि तथा रियल स्टेटको व्यवसायमा पनि संग्लग्न छन् ।
‘मलाई अध्यक्ष जिताउने सबै साथीको विश्वास म गुम्न दिन्नँ,’ गम्भीर हुँदै उनले सुनाए, ‘मसँग वाक्पटुता छैन, म बोल्नुभन्दा काम गरेर देखाउन चाहन्छु । उनलाई ‘नेपालबाहिर बस्नेले केही न केही कमाएका छौँ’ भन्ने लाग्छ । ‘हामी समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ,’ उनले भने ।
एनआरएन संस्था बनेको ६ वर्ष पुग्यो । उनी सुरुकै कोषाध्यक्ष रहेछन् । ‘यो संस्था बन्नमा उपेन्द्र महतोको योगदान सराहनीय छ,’ सँगै बसेका उपेन्द्र महतोलाई धन्यवाद दिन उनी चुकेनन्, ‘आज विश्वभरि छरिएर रहेका २५ लाख नेपालीलाई सम्भिmरहेको छु, मलाई उनीहरूको हक-हितका लागि लड्न थप प्रेरणा मिलेको छ ।’
सन् २००३ मा काठमाडौंमा पहिलो सम्मेलन आयोजना गर्दा संसारभर छरिएका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकको दूतावासमार्फत सम्पर्क गरिएको थियो रे ! ‘पहिलो सम्मेलन अपेक्षाकृत भव्य भएपछि विश्वका कुना-कुनामा रहँदैै आएका नेपाली यो अभियानप्रति आकषिर्त हुँदै गएका छन्,’ उनले सुनाए, ‘एउटै सहरमा वर्षौं बस्दा, चिनजान नभएकाहरू पनि यो अभियानपछि आत्मीय, पारिवारिक र व्यावसायिक सम्बन्ध बढ्दै गएको छ ।’ अहिले ५५ भन्दा बढी देशमा यसको संगठन विस्तार भएका छन् । ‘२० देखि ३० जना मात्रै नेपाली भएको यो देशमा पनि यो संस्था गठन भइरहेको छ,’ उनले सुनाए ।
गैरआवासीय नेपालीले देशमा त्यति ठूलो लगानी गरेको देखिएको छैन । के गरेको छ गैरआवासीय नेपालीले आफ्ना देशमा ? ‘विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली पहिलो पुस्ता हुन् । १५ वर्षयता धेरै नेपाली विदेश पस्न थालेका हुन् । म जापान पुगेको ३६ वर्ष भयो । मभन्दा अघि जापान पुगेर स्थापित हुनेको संख्या औँलामा गन्न सकिन्छ,’ बाहिरको छिप्पिँदो रातमा उनले सुनाए, ‘पहिलो पुस्ताका आप्रवासी नेपाली आफैँ स्थापित हुन संघर्ष गर्ने क्रम सकिएको छैन ।’ देवमानलाई लगानी गर्न क्षमता भएका नेपालीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने लाग्छ । ‘तर देशको वातावरण लगानी मैत्री छैन,’ उनले सुनाए ।
उनलाई विदेशमा बस्ने नेपालीको कुनै कानुनी हैसियत र पहिचान छैन भन्ने लाग्छ । ‘गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न ठिक्क पारेका रकम वर्षौंदेखि बैंकमा थन्क्याएर राख्नुपरेको छ,’ उनले सुनाए । माइखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि गैरआवासीय नेपालीले तीन वर्षअघि नै रकम जम्मा गरिसकेको उनी सम्झन्छन् ।
एनआरएनको ६ वर्षे आयुमा धेरै उथल-पुथल भएको छ । नेतृत्व फेरिएको छ । सदस्य संख्या बढेको छ । विश्वका थुप्रै राष्ट्रमा एनआरएनको संगठन विस्तार भएको छ । एनआरएनको संगठन विस्तार अभियानले अझै व्यापकता पाउने उनले बताए । यो अभियानले मुलुकका लागि कस्तो योगदान पुर्‍याउन सक्छ ? ‘विश्वभर नेपालीले प्रशस्त सामाजिक प्रतिष्ठा, सीप, ज्ञान र पँुजीसमेत आर्जन गरेका छन्,’ हिराचनले सुनाए, ‘देशले संकटको साथीका रूपमा विदेशमा बस्ने नापालीलाई उपयुक्त वातावरण दिई स्वदेश र्फकन आह्वान गर्ने हो भने आर्जनको सीप र पँुजी लिएर र्फकन तयार अवस्थामा नेपालीलाई यो अभियानले पुर्‍याएको छ ।’ उनी यो अभियानमा लागेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्किसकेको पनि सुनाउँछन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि र्फकन आह्वान गर्नैपर्छ । नेपाल भएर पो हामी छौँ, नभए हाम्रो के अर्थ ?’
भर्खरै अध्यक्ष भएका देवमान हिराचन गैरआवासीय नेपाली देशमै नफर्के पनि हाम्रा लागि थुपै्र योगदान गर्न सक्छन् भन्छन् । ‘लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको देश र मातृभूमि नेपालबीच सम्पर्कपुलको रूपमा गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले लिनुपर्छ । विदेशमा बस्नेको विशेषज्ञता र अनुभवको कदर गरेर दायित्व दिने हो भने धेरै विदेशी सहयोग र लगानी पनि देशमा भित्र्याउन सकिन्छ । गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित मुलुकको सरकार र संस्थासँग कसरी प्रभावकारी रूपमा सहयोग माग्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी थाहा पाएका हुन्छन्,’ उनले सुनाए, ‘हामीले पटक-पटक सत्तासीन व्यक्ति र राजनीतिक दलका नेतालाई विदेशमा रहेर पनि नेपालको सेवा गर्न उपयुक्त मौका दिन आग्रह गर्दै आएका छौँ ।’
तिहारको मौका छोपी नेपाल पसेका एनआरएनहरू सम्मेलन र विजयोत्सव मनाइरहँदा विजयी अध्यक्ष हिराचन नेपाली मिडियासँग कुरा गर्दै छन् । उनी सरकारी प्रतिनिधिमण्डल कुनै पनि मुलुकको भ्रमणमा जाँदा त्यही देशमा बसोवासरत नेपालीलाई पनि सदस्यको रूपमा सामेल गराउने हो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ, भन्छन् । ‘ती नेपालीले कम्तीमा स्थानीय भाषामा कुरा गर्न सक्छन् । सञ्चारलाई सजिलो बनाउन सक्छन् । यसका लागि सरकारले खर्च गर्नैपर्दैन । सरकारले यो सम्भावनाको उपेक्षा गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा नेपालीले कमाएको रकम लगानीका रूपमा भित्र्याउन सहयोग गर्न सक्छ । विदेशका अनुभवलाई स्वदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा प्रयोग गराउन सक्छ,’ उनले सुनाए ।
एनआरएनले नेपाल सरकारबाट निकै सहुलियत र सुविधा खोजेका छन् । थुप्रै माग बोकेर अनेकपटक नेपाल झुल्किन्छन् एनआरएनहरू । समस्या तेस्र्याउन सजिलो हुन्छ । पूरा गर्न निकै गाह्रंो । एनआरएन सेवा र सुविधा खोज्छ र बोलेको कुरा पूरा गर्दैन, होइन र ? ‘गैरआवासीय नेपालीले प्रतिबद्धता गरेका कुरामध्ये १० करोड डलरको लगानी कोषको काम पूरा हुन सकेको छैन,’ हिराचन सुनाउँछन्, ‘हामीले काम पूरा गर्न सकेनौँ किनभने गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता नभएकाले त्यो लगानीकोषसमेत नेपालमा स्थापना नभएको हो । हामीले ७५ जिल्लामा विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सामाजिक परियोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । हाम्रा परियोजना अधिकांश स्थानमा सुरु पनि भइसकेका छन् । कतै परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ, कतै सुरु हुने अवस्थामा छ ।’
एनआरएनलाई हल्ला गरेको जस्तो लगानी नेपालमा नगरेको आरोप पनि छ होइन ? ‘लगानी त अब आइहाल्छ नि ! तर, यसका लागि नेपाल सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्‍यो । मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको वेला नै यहाँ लगानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ,’ गभ्मीर हुँदै उनले भने, ‘सरकारले वातावरण निर्माण गरिदेओस्, एनआरएनले व्यापक रूपमा लगानी विस्तार गर्नेछ ।’ कस्तो वातावरण ? ‘पहिले हामीलाई सरकारले दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ । मेरो सक्रियता यसैका लागि हुनेछ । झन्झटिलो ऐन र कागजी प्रक्रिया हटाउनुपर्छ सरकारले । सरकारले यी काम गरे मुलुक समृद्धशाली बनाउन एनआरएनले ठूलो भूमिका खेल्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनी गैरआवासीय नेपालीले जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवधारणा अघि बढाएको बताउँछन् । ‘यसमा सरकारी असहयोग रहँदै आएको छ । व्यावसायिक लगानीका लागि वातावरण बनाएको छैन । प्रशासनिक झन्झट अझै पनि थुप्रै छन् । गैरआवासीय नेपालीले शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्योग, सञ्चार, दूरसञ्चार, घर-जग्गालगायत थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ,’ उनले सुनाए, ‘तर मैत्री वातावरण पाउन सकेको छैन ।’
हिराचनले अध्यक्ष भएपछिको भाषणमा पनि उपेन्द्र महतोको अभाव अब खट्किने संकेत गरेका थिए । एनआरएनका पिता भनिन्छ, महतोलाई । अब निवर्तमान अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोको अभाव एनआरएनमा खट्किन्छ भन्ने हल्ला छ नि ? ‘महतोले ६ वर्षसम्म यसको नेतृत्व सम्हालेर निकै अनुकरणीय काम गर्नुभएको हो । यसका लागि उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु । अब एनआरएनले संस्थागत प्रारूप पाइसकेको छ,’ उनले सुनाए, ‘नयाँ नेतृत्वले सबैलाई समेटेर नेपालको समृद्धिका लागि कार्यक्रम ल्याउँछ । यसका लागि ढिलाइ गर्नेछैनौँ, हामी । उहाँ नयाँ कार्यसमितिमा नरहे पनि उहाँको सक्रियतामा कुनै कमी आउन दिनेछैन ।’
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली ०६६ मा उल्लेख भएअनुसार गैरआवासीय नेपालीको पहिचानका लागि सरकारले यही वर्षबाट परिचयपत्र वितरण थालेको छ । परिचयपत्रमा नेपाल भित्रिन भिसा शुल्क मिनाहा, एकैपटक दस वर्षसम्मको भिसा दिन सकिने, एनआरएनको रूपमा नेपालमा उद्योग खोल्न सकिने र उद्योगको नाफा लगानीकर्ताले जता लैजान चाह्यो उतै लैजान सक्ने सुविधा र जग्गा खरिद गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
तर पनि संवादमा निकैपटक उनले दोहोरो नागरिकताको कुरा दोहोर्‍याए । ‘अब गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ । नेपाल सरकारसँग हामीले पटक-पटक दोहोरो नागरिकता माग गरेका छौँ । तर, सरकार कानमा तेल हालेझैँ बस्छ,’ उनले भने । तर, जुन-जुन राष्ट्रले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्ने कानुनी प्रवधान बनाएको छ । ती राष्ट्रमा रहेका नेपालीले मात्र दोहोरो नागरिकताको सुविधा लिन सक्छन् ।
२५ लाख नेपाली मुलुक छाडेर बाहिर गएका छन् । कति भोकले बिदेसिएका छन् भने कति सोखले । तर, उनीहरूको जीवनमा अहिले घाम लाग्न थालेको छ । नेपालीका आफ्नै पीडा छन् । तिनका दुःख सुनिनसक्नुका छन् । भनिनसक्नुका छन् । पीडाको लामो कथा लिएर उनीहरू बाँचेका छन् । कस्तो छ डायास्पोरा नेपालीका दुःख ? ‘नेपाली अहिले समृद्ध बन्दै गएका छन्,’ यो कालो रातमा उनले सुनाए, ‘उनीहरू सीप र क्षमतामा विश्वास गर्छन् । तर, कति नेपाली साह्रै दुःखी छन् । नेपाल खुब सम्झन्छन्, उनीहरू । नेपाल खुब मिस गर्छन् नेपालीहरू,’ यति बोल्दा उनी हल्का हाँसेका देखिन्थे ।
हरेक हाँसो गम्भीर छन् र हलुका पनि । हरेक मूल्य अर्थपूर्ण छन् र पनि सघन छैनन् । हरेक प्राप्ति सम्पन्न छन् र पनि विपन्नै छन् । अर्थात बेलुनजस्ता । गैरआवासीय नेपालीको प्राप्ति पनि कतै बेलुनजस्तै फुकेको पो हो कि ? जीवन सुखी बनाउने दौडमा उनीहरू आमाको माया र देशको सपना कता लुकाउँदै छन् होला
« स्वदेशको माया र पर्वको सम्झना:
नेपाल संवत ११३० न्हू दँया लसताय् भिन्तुना >>>> »